8Yar (အိပ်ယာ): 8Yar ၏ရွာရိုးကိုးပေါက် နှင့် အလှုရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by 8Yar at 1:28 pm
ဖိုက်ဘာပုံးကြီးက ကိုအိပ်ရာကိုးး)))
ဒါမှ မဲများများရမှာလေ :D
ဟဟဟ.. အလှူခံတာတောင် သူက ဟာသလေးနဲ့ :P
တိန်!!! ရက်စက်လိုက်တာ သမံစီးရယ်။ အဲဒါ စည်ပင်က ခွက်! အဲလေ.... အမှိုက်ပုံးဖြစ်မှာပေါ့။ ဖလားက အဲ့လောက် ကြီးမလား အေ။ :P
ဟုတ်တယ် အစ်မ Jas ရေ။ လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေးကူညီတာပါခင်ဗျာ။
:D :D :D ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေကို ပျော်ရွှင်စေချင်လို့ပါဗျာ။..
သာဓု သာဓု သာဓု ရယ်ရယ်မောမော ခေါ်သွားတယ် မောင်8Yar :D
အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်းအားပေးရင်း တီတင့်လည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်
သာဓု၃ ကြိမ်လဲခေါ်ဆိုပါတယ်အေ .
မဒိုးကန် (ဓညင်းသီး ကိုယ်စားလှယ် :P)
:D :D :D ဟုတ်ကဲ့ လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်ရေ။ ကျွန်တော်လည်း အန်တီတင့်ရဲ့ ကုသိုလ်ကို သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ခေါ်ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
ဟိုက်! မြန်ထှာ။ ဘယ်တုန်းက ဖတ်သွားတာပါလိမ့်။ ခစ်ခစ်... အလုပ်ကနေ လှမ်းကြည့်တာကိုး။ ဟိ ဟိ ကျေးကျေးပါ အစ်မဒိုးရေ။ နောက် အလှူတွေရှိရင်လည်းပြောနော် တင်ပေးမယ် အစ်မဒိုး အကြောင်း တိန်! မွှားလို့ အလှူအကြောင်း Post တင်ပေးမယ်လို့ ကြောတာ။ :P